Asa - DataNumen
Tongasoa eto amin'ny toeram-piasana mahaliana sy mamorona, izay ny olona no manamboatra azy.
At DataNumen, fantatray fa ny fahombiazantsika dia vokatry ny asanay mpiasa tsy mampino — ekipa matihanina manana talenta sy be zotom-po, miara-miasa amin'ny famoahana vahaolana fanarenana data izay manampy ny olona rehefa misy ny voina data. Izahay dia mazoto amin'ny zavatra ataontsika sy ny olona anaovantsika izany, ary miaraka amin'izany fientanam-po izany no tanjona.
Amin'ny maha ekipa antsika dia mitady fomba vaovao sy vaovao hatrany izahay hamaliana ny filan'ny mpanjifanay sy hampiasana ny orinasanay.
Tsotra ny iraka ataontsika: manaova vokatra tsara hanampiana ny olona hamerina ny angon-drakitra araka izay azo atao. Ny tontolon'ny asa iarahanay miasa dia mitazona anay hifantoka sy hiombon-kevitra amin'ny fanatanterahana izany tanjona izany. DataNumenNy kolontsaina dia mandray ny fahasamihafan'ny hevitra, ny fomba fiainana, ny fahitana ny matihanina ary ny fomba fijery manokana. Izahay dia mirehareha amin'ny zavatra ataonay ary mitady olona mafana fo foana izahay mba hitazomana ny fandrosoan'ny orinasa.
Liana amin'ny fidirana amin'ny ekipanay? Jereo ny asanay etsy ambany ary ampiharo anio.
Mametraha lisitra misimisy kokoa